သက်သတ်လွတ်စားခြင်း ~ Myanmarmuslim - Islamic Resource
တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကို သတ်ဖြတ်တာဟာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အပြုအမူပဲ။ မွတ်စလင်တွေက ဘာကြောင့် အသားကိုမှ စားကြရတာလဲ။
အစ္စလာမ်က သတ္တဝါ ခပ်သိမ်းကို သနားကရုဏာထားကြဖို့ ဆိုထားပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အလ္လာဟ်က အံ့ဩဖွယ်ရာ သစ်ပင် ပန်းမာလ်တွေ သတ္တဝါတွေကို လူသားရဲ့အကျိုးအတွက် ဖန်ဆင်းပေးထား တော်မူတယ်။ လူသားဘက်ကတော့ ဒီကမ္ဘာရဲ့ အရင်းအမြစ်တိုင်းကို တရားနည်းလမ်းတကျ အလ္လာဟ်ဘက်က ပေးလာတဲ့ နေအ်မသ် ကောင်းချီးချမ်းသာနဲ့ အမာနသ် ယုံပုံမှုအဖြစ် သုံးစွဲကြရမယ်လို့ပါ တိုက်တွန်းထားတယ်။
မွတ်စလင်တစ်ဦးဟာ သက်သတ်လွတ် စားသူအဖြစ်နဲ့လဲ မွတ်စ လင်စစ်စစ်တစ်ဦး ဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ မွတ်စလင်တစ်ဦးကို အသားကိုပဲ မှီဝဲကြရမယ်ဆိုပြီး မလုပ်မနေရ မပညတ်ထားပါဘူး။
“အို...ယုံကြည်သူတို့၊ တာဝန်ခပ်သိမ်းကို ကျေပွန်ကြ၊ အသင်တို့ (အစားအစာ) အတွက် ခြေလေးချောင်း သတ္တဝါတို့အား အမည် နာမနှင့် ချွင်းချက်ပေး ခွင့်ပြုထား တော်မူသတည်း။” [ အလ် ကုရ်အာန် ၅း၁ ]
ယုဒိရှ် သီရ ကဆိုသည်။ “အို . . . ငါ့စကားကို နားထောင် လော့၊ သေသူတို့အတွက် ရည်စူးပြီး အဘယ် အရာကို အလှူပြုပါသော် အကျိုးကုသိုလ် မကုန်မခမ်းရာ ဖြစ်အံ့။ တစ်ဖန် အဘယ်အရာ ဟာဗီ(စ) နှင့် ပသခဲ့ပါသော် အမြဲ ထာဝရ ကုသိုလ်အကျိုး တည်တံ့အံ့ရာနည်း။ အမှန်တွင် အဘယ်အရာနှင့် ပူဇော်ပါက ရေရှည် တည်အံ့ရာနည်း။”
ဘိရ်ှမားက ဆိုသည်။ “အို . . . ယုဒိရ်ှသိရာ၊ ငါ့စကားကို နားဆင်လေ။ ထိုထို သူက ပွမ်းတီးထားရာ ဟာဗီ(စ)တို့သည်သာလျှင် သေသူကို ရည်စူး၍ ပြုသည့် အလှူတော် (ရှရဒဟ်)အဖို့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်၏။ ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ သစ်သီးဝလံတို့ကိုလည်း တွဲဖက် ပါဝင်စေသော် ပိုပြီး သင့်ရာ၏။ အကယ်၍ နှမ်း၊ ဆန်၊ မုယော၊ မာရှာ၊ ရေနှင့် သစ်မြစ် သစ်သီးများနှင့် သေသူအဖို့ ရည်စူးပြီး ဆက်ကပ်လှူဒါန်းသည် ရှိသော် သေသူတို့က တစ်လထိ ပီတိ ဘဝင်ရွှင်ပြီး ရှိအံ့။” အို . . . မင်းကြီး၊ ငါးသားကို တည်းခင်းကျွေးမွေးခဲ့ပါသော် သေသူတို့က နှစ်လတာ ရွှင်ကြည်နေအံ့။ သိုးသားနှင့် တည်ခင်းသော် သုံးလ၊ ယုန်သားဆိုက လေးလ၊ ဆိတ်သားဆိုပါက ငါးလ၊ ဝက်သားနှင့်ဆိုက ခြောက်လ၊ ငှက်သားဆိုသော် ခုနှစ်လထိ ကျေးဇူးတင်ရှိနေအံ့။ ပရိရ်ှတာဟုခေါ်သော သမင်၊ ဒရယ်၊ ချေတို့မှရသည့် အသားနှင့် အလှူပြုသော် တမလွန်မှာ ရောက်နေသူတို့ကို ရှစ်လအထိ ကျေးဇူးဆပ်ရာ ရောက်အံ့။ ရူရုအသားနှင့် လှူသော် ကိုးလထိ ကျေးဇူးဆပ်ရာ ရောက်အံ့။ ဂူဗာရား အသားနှင့် လှူဒါန်းကျွေးမွေးခဲ့သော် ဆယ်လတာ ရွှင်မြူးပြီးရှိအံ့။ ကျွဲသားနှင့်ဆိုပါက ဆယ့်တစ်လတာအထိ သူတို့က ဝမ်းမြောက် ရွှင်မြူးနေကြချေအံ့။ အမဲသားနှင့်အလှူပြုသော် ဆယ့်နှစ်လ တစ်နှစ်လုံးအထိ ရွှင်မြူးဝမ်းသာ နေကြအံ့။ ထောပတ်နှင့် ပယာဆာတို့ကို ရောပြီးလှူသော် အမဲသားကဲ့သို့ပင် တစ်နှစ်လုံး ဝမ်းမြောက် ကြည်နူးစွာ နှင့် ရှိနေချေအံ့။ ဧရာမ နွားသိုးကြီး အသား (ဝဒရီနဆာ)ဖြင့် လှူဒါန်း ကျွေးမွေးခဲ့ပါသော် နှစ်နှစ်တာအထိ ရွှင်မြူးနေချေအံ့။ ကြံ့သားဖြင့်သူတို့သေဆုံးရာ လပြက္ခဒိန် ရက်နေ့များမှာ ရည်စူးလှူဒါန်းခဲ့ပါသော် အတောမသတ်နိုင်အောင် ရွှင်မြူးနေကြချေအံ့။ ကန်ချာနာပန်း၏ ပွင့်ဖတ် ပွင့်ချပ်များ၊ ကလပ်စကာနှင့် အနီရောင်အဆင်းရှိ ဆိတ်၏ အသားဖြင့် ရည်စူး ဆက်သခဲ့လျှင်လည်း အလားတူပင် အတောမသတ်နိုင်အောင် ရှိအံ့တည်း။
“အို .. လူသားတို့၊ မြေကမ္ဘာဝယ် ရှိရှိသမျှသော အရာများ အနက် သန့်စင် ကောင်းမွန်သော အရာတို့ကို စားသုံးကြတဲ့။”[ကုရ်အာန် ၂း၁၆၈]
တကယ်လို့ လူတိုင်းလူတိုင်းကသာ သက်သတ်လွတ်စား သမား တွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် သူတို့တွေရဲ့ မျိုးပွားနှုန်းနဲ့ ပွားများနှုန်းက အင်မတန် မြန်လွန်းတာကြောင့် ကမ္ဘာမှာ ကျွဲနွား တိရစ္ဆာန်ဦးရေဟာ အဆမန် ပေါက်ကွဲနေပါမယ်။ အလ္လာဟ်ရှင်က အရှင့်ရဲ့
အနန္တ ဥာဏ်တော်ကြောင့် အရှင့်ရဲ့ ဖန်ဆင်းမှုချိန်ခွင်လျှာကို အချိုးကျကျ ဘယ်ပုံတည်နေရမယ် ဆိုတာကို သိတော်မူတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွဲနွား သိုးဆိတ်စတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ အသားကို အရှင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို စားသုံး ခွင့်ပြုထားတာဟာ အံ့ဩစရာ မရှိပါဘူး။
လူတချို့က သက်သတ်လွတ်သမားတွေ ဖြစ်နေတာကို ကျွန်ုပ် က အမှု မထားပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ သူတို့ဘက်က သားငါး စားတဲ့သူ တွေကို ရိုင်းစိုင်းရက်စက်သူတွေဆိုပြီးတော့ ရှုတ်မချသင့်ပါဘူး။ တကယ် ဆိုရင် အားလုံးသော အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကသာ သက်သတ်လွတ်သမားများ မဟုတ်ကြတော့ဘဲ သားငါးစားသူတွေ ဖြစ်သွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိ သားငါးစားသမားတွေဟာ ပိုပြီး ဆုံးရှုံးမှု ကြီးထွားသွားရပါ လိမ့်မယ်။ အသားရဲ့တန်ဖိုးက ဈေးထိုးတက်သွားမှာ ကြောင့်ပါပဲ။